Ukufakwa kwenkampani elunxwemeni eCyprus - iNkampani yaseSwitzerland yeOfisi yeLwandle
CI-hipre sisisiqithi esisekwe ngobuchule kwiMeditera kwaye yeyase-European Union ukusukela ngo-2004. Ngenye yezona ndawo ziphambili kwezemali eYurophu, ibe lulawulo olufanelekileyo kakhulu lokuqhuba ishishini elinxulumene norhwebo lwamazwe nezorhwebo ngenxa kubhetyebhetye kwabo kunye nobuchule babo iinkonzo zenkampani kunye neebhanki
Yi Ukunyanzelwa kweSwitzerland siyiyo Abacebisi bamazwe ngamazwe kunye nerhafu Ngamava abanzi kwicandelo. Siququzelela ukudalwa kweenkampani ezingaselunxwemeni kunye nokuvulwa kweeakhawunti zebhanki kweli lizwe. Zonke iinkqubo zenziwa zivela eSpain, ngale ndlela, abathengi bethu abanasidingo sokuhamba baye kwilizwe, okwenza yonke imisebenzi ibe lula kubo.
Izikhuthazi zerhafu ephezulu
Esona sizathu Ngenisa inkampani kwiCyprus kukuba inezikhuthazi zerhafu: ibonelela iinkampani ngeendlela ezifanelekileyo zokucutha irhafu, ngelixa lifumana inani VAT Isebenzayo ekusebenzeni kulo naliphi na ilizwe le-EU.Ixabiso lerhafu yeenkampani ezibhalisiweyo eSipro yi-10% ngeli lixa umyinge waseYurophu umalunga nama-30%. Akukho zahlulo zirhafu ziyekiswayo okanye akukho rhafu yokufumana imali.
Silawula umgaqonkqubo wenkampani kunye nokuvulwa kweakhawunti yebhanki evumelana nezidingo zakho eCyprus nakwimimandla engaphaya kwama-40 kumazwekazi amahlanu.
Unxibelelwano lwabucala oluyimfihlo
Kusemthethweni na ukwenza inkampani elunxwemeni eCyprus?
Yenza a Inkampani engaselwandle kwi-cyprus isemthethweni. Kuya kubakho ukuchasana nomthetho xa umnini wale nkampani engafezekisi uxanduva lwerhafu kwilizwe lakhe lokuhlala kwaye engazisi iimpahla anazo phesheya. Ukuba unemibuzo malunga noku, nceda qhagamshelana nathi.
Inkqubo yokwenza Inkampani eCyprus ifuna umsebenzi weengcali kunye nengcebiso eyaneleyo ukuthintela ukuwela kwizitenxo. Nge Ukunyanzelwa kweSwitzerland, abacebisi bezimali bamazwe aphesheya nabazimeleyo, banakho ukwenza i nkampani ngeakhawunti yebhanki evela kwintuthuzelo yekhaya lakho, enkosi kuthi umgaqo-siseko weenkampani ezingaselwandle kukude.
Izizathu zokubandakanya inkampani eSipro
Banokugcina ngokukhululeka iiakhawunti zebhanki, ngayo nayiphi na imali, eSipro okanye kwelinye ilizwe ngaphandle kwemiqobo yolawulo lotshintshiselwano.
Alukho uluhlu olumnyama
Se ithathwa njengendawo yokuhlawuliswa irhafu yimithetho emininzi yaseYurophu nangona ingeyonxalenye yohlu lwabamnyama bayo nayiphi na intlangano, uhlobo lwe-OECD okanye neliphi ilizwe.
CI-hipre inesikhundla esikhethekileyo ngaphakathi kwi-Union. Kuyinxalenye yalo kwaye yamkele i-euro ukusukela ngo-2008. Iya kuba nozinzo kwezoqoqosho nakwezopolitiko exhaswa ngamalungu ayo kwi-EU.
Ucwangciso lwerhafu lwamanye amazwe
LUbukho bezivumelwano zerhafu kabini kunye namazwe amaninzi, kubandakanya iRussia kunye namanye avela kwimpuma yangaphambili, zidibene neerhafu eziphantsi ezihlawulwe ziinkampani zinika amathuba amakhulu ocwangciso lwerhafu yamanye amazwe.
Iibhanki ezibonelela ngeeakhawunti kwiinkampani ezingaselwandle eCyprus